OnePlus na-enye wardsgwọ Ọrụ Worth Lakh Maka Ndị Ọgbakọ Cable Club Network - 【Comparison】
OnePlus 8T 5G - 6.55 120 8 Hz FHD Smartphone + Screen Fluid, 128 GB Ram + 65 GB Space Space, Quad Camera, 5 W Warp Charge, Dual SIM, XNUMXG, Silver (Silver Lunar)
Chaja na Warp Charge na 65W. Ike zuru oke maka otu ụbọchị eji ya na nkeji iri na ise | Batrị 15 mAh
OnePlus na-enye ndị otu Red Cable Club ụgwọ ọrụ kwesịrị lakh
OnePlus ekwuputala ọkwa Red Cable ọhụrụ na nke naanị maka ndị ọrụ ya, na-enye ọtụtụ ndị elele na ụgwọ ọrụ nye ndị nwere ekwentị OnePlus. Kemgbe ọtụtụ afọ, OnePlus ezukọtala ndị ọrụ ekwentị OnePlus dị iche iche bụ ndị so na obodo ya nwere njikọta.
Otu n'ime ndị Red Cable Club bụ nzọ ụkwụ na mbọ nke ụlọ ọrụ ahụ iji wusie obodo ya ike ma wuo klọb ahụ. Aha a dabere na agba uhie nke eriri USB nke OnePlus nyere ya na ngwaahịa ya niile. "Ihe ukwu na - eme ma anyị niile jikọọ," ka OnePlus kwuru na ibe ụlọ Red Cable Club.
Otu eriri Red Cable Club bara uru
OnePlus na-akwado Cable Jackpot Network ebe ndị ọrụ OnePlus ama ama nwere ohere iji merie igbe onyinye bara uru Rs na Lakh na 50% ego na Bullet Bullet 2. Enwere ngụkọta igbe igbe Jackpot isii na Kupọns 20,000 na Ikuku Chips 2.
Ndị nwere OnePlus igwe nwere ohere iji merie njem na mba ụwa, ahụmịhe iri nri na họtel mara mma, Echo Dot, ngwa OnePlus, kaadị akwụmụgwọ rupees 10,000, kaadị ihe nkiri n'efu maka otu afọ na ngwugwu. Nke ntụrụndụ.
Red Cable Club Jackpot bụ usoro ụgwọ ọrụ kwa ụbọchị nke ga-aga n'ihu ruo Disemba 31, 2019. Ndị ọrụ OnePlus nwere ike isonye na jackpot kwa ụbọchị: otu ikpe kwa ụbọchị ruo mgbe ha meriri ihe.
Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahụ na-enye 50GB nke igwe ojii nchekwa na-akwụghị ụgwọ maka otu afọ na uru nke OnePlus Care gụnyere agbatịkwu agbatị, mbelata 50% na nnọchi batrị, na mmelite ndị ọzọ na-enye.
Ndị otu OnePlus Red Cable Club ga-enwe ohere “ịhazi” elele nke isonye na ọgbakọ Pụrụ Iche pụrụ iche na 2020. Ndebanye aha maka oghere ntị 2020 ga-abịa n’oge na-adịghị anya.
Etu ị ga - esi bụrụ onye otu OnePlus Red Cable Club?
Ọ bụrụ n’inwe ekwentị OnePlus na-agba gam akporo 10, soro usoro ndị a iji sonyere Red Cable Club. Dị njikere na ekwentị gị na-emelite ka ọhụrụ version nke gam akporo 10 tupu ịga n'ihu.
Gaa na ntọala
Pịa na profaịlụ akaụntụ OnePlus gị n'elu; ma ọbụghị, banye na akaụntụ OnePlus gị
Jikọọ akaụntụ OnePlus gị na ekwentị
Ma ugbu a ị debanyere aha gị ịbụ onye otu Red Cable Club
Ọ bụrụ na usoro a anaghị arụ ọrụ maka gị, ekwentị gị nwere ike na-agba ọsọ na ụdị ochie nke gam akporo. Nke a bụ azịza ya.
Budata / melite ngwa OnePlus Community
Gaa na profaịlụ nke obodo wee pịa ọkọlọtọ Red Cable Club
Jikọọ ekwentị gị na akaụntụ OnePlus
Maka ndị ọrụ nwere OnePlus One, One Plus 2 ma ọ bụ OnePlus X, ọ dị ha mkpa ibudata OnePlus Care ma nyochaa ngwaọrụ ahụ maka uru ndị ọzọ.